आजको राशिफल।। पाथीभारामाताले कल्यान् गरुन ।भाद्र २३ मगंलबार यँहाहरुको भा’ग्य कस्तो छ?:: Mero Desh
आजको राशिफल।। पाथीभारामाताले कल्यान् गरुन ।भाद्र २३ मगंलबार यँहाहरुको भा’ग्य कस्तो छ?
Published on: २२ भाद्र २०७८, मंगलवार २३:४०
काठमाण्डौं।यहाँहरु सबैको दिन शुभ रहोस् आजको राशि फल।। पाथीभाराको दर्शन गरि शेयर पनि गरौ ।”भाद्र २३ मगंलबार यहाहरुको भाग्य कस्तो छ?अब सुरु हुुुुन्छ मेष-मेषः व्यापार व्यवसाय”बाट मनग्ने आ’म्दानी हुने छ भने” आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरु पनि पहि’ल्याउन सकिने छ
विभिन्न अवस”रले प’छ्याउने तथा रोजगारी पाउने समय’ रहेको छ । भौतिक तथा भोग”विलासका सामानहरु प्राप्त हुनेछन् दाम्पत्य अवस्था सुमधुर बन्नेछ भने अ:विवाहितहरु को प्रेमले आ”गामी दिनहरु मा वि”वाहरुपी नि’कास पाउने योग अध्ययनमा प्रगती हुने।आजको दिन फलदायी रहनेछ
वृषः कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा ध्यान दिनुहोला आलोचना गर्ने हरु सक्रिय हुनेछन् । अनावश्यक साईनो गास्ने तथा बचन दिनेहरुबाट सजक र’हनुहोला ।सरकारी तथा प्र”शासनिक काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । सेवा प्रवाह गर्नेहरुले समयमा काम नगर्दिनाले महत्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्नेछ ।
मिथुनःधर्म तथा अध्यात्म जस्ता क्षेत्रमाहरुमा रुचि बढ्नेछ खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा बलियो उपस्थिती रहनेछ ।व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै सवाल मा देश विदेश को यात्रा पनि हुनेछ ।माया प्रेम सुमधुर भएर जानेछ प्रशासनिक क्षेत्रमा गतिलो तथा सम्मानजनक उप- स्थिती रहनेछ ।
कर्कटः आफन्त तथा दिदिबहिनी सँग मन”मुटाव सिर्जना हुने योग रहेको छ समय तथा परिस्थिती अनुसार नचल्नाले दुख पाईनेछ व्यापार व्य’वसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्ने योग रहेको छ । माया प्रेममा धो का हुनेछ भने पति दा”म्पत्य जीव’नमा घट”पट आउनेछ सा”मान्य स्वास्थमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ ।
सिहंः माया प्रेममा नजिक हुने तथा रमाईलो या’त्राको तय गर्न सकिनेछ भौतिक वस्तु तथा बिलाशी सा’मानको प्रयोग गरी अरुको ध्यान तान्न सकिनेछ । पारिवारिक माहोलमा जमघ”ट भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ एकल तथा साझेदारि व्यवसाय बा’ट भने जस्तो आम्दानी हुनेछ । पढाई लेखाईमा सफलता हात पार्न सकिनेछ ।
कन्याः पुराना रोग पुनब”ल्झिनाले स्वास्थ्यमा समस्याहरु आउन सक्छ ।विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा आजको दिन समय मध्यम रहेकोले प्रतिस्पर्धी हरु नै हाबी हुनेछन् । अदालती निर्णयहरु तपाईको पक्षमा आउने छैनन् । आफ्नो नजिक को मान्छेसँग सामान्य शंकाले केही समयको लागि टाडिनु पर्ने बाध्यता आउनेछ । आफन्त,मामा तथा मावली पक्षसँग राय बा’जिनेछ ।
तुलाः पढाई लेखाईमा मन जाने तथा भने जस्तो नतिजा” हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेम सुमधुर हुनेछ भने विभिन्न वस्तु तथा उपाहार प्राप्त हुनेछ व्यवसायकै सवालमा रमाई लो यात्रा गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । वौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्र फराकिलो हुनेछ
वृश्चिकः सजक नबन्दा आफन्त टाढिनेछन् भने अध्ययन तथा कामको शिलशीलामा कष्टकर यात्राको तय गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । व्यापारमा मन्दी भएपनि कृषी तथा पशु पालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । छोटो समयका लागी हेरिने फाईदाले पछी लाई घाटा हुन सक्छ योजनाहरु तत्काल सार्वजनिक नगर्नु नै उत्तम हुनेछ ।
धनुः आँट, शाहस तथा पराक्रमा वृद्धि भएर जाने हुनाले उपलब्धी मुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । न्यायिक निर्णय हरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् भने विवाद तथा प्रतिस्पर्धा मा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । लेखन कला तथा साहित्यमा बाँकी रहेको कामलाई पूर्णता दिन सकिने छ । प्रेम प्रशङ्गमा रमाउने चाहनेहरुला लागि समय उत्तम रहेको छ ।
मकरः धन भावमा गोचर गर्ने शुभ चन्द्रमाले व्यापार व्यव- साय फस्टाएर जाने हुनाले दैनिक आम्दानीमा बढो त्तरि हुनेछ । आफ्ना भनाईहरु जनमानसमा लैजान सकिने तथा बोलेरै धन आर्जन गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बका साथ रमाईलो यात्रा गर्दै मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रेममा रमाउने चाहनेहरुका लागि समय फल दायी रहनेछ ।
कुम्भः नयाँ तथा रचानात्मक काम गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ पार्न सकिनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने पुराना कामहरु सम्पादन हुनाले थप हौसला प्राप्त हुनेछ । सामाजिक काममा होमिने हरुका लागि समयले साथ दिनेछ । अध्ययनमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने उत्कृष्ट नतिजाले परिवारका सदस्य तथा गुरुहरु खुसि हुनेछन् ।
मीनः आफन्त तथा साथी भाईबाट टाडिनु पर्दा मन खि न्न हुनेछ । धो का दिने तथा आशा देखाउनेहरु सक्रिय हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा आलोचना गर्नेहरुबाट सजक रहनुहोला । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला औ ष धि उपचार खर्च बढ्नेछ । अध्ययनमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । तरपनि यात्रा हुने तथा विदेशी सामानको व्यापार फस्टाएर जानेछ।